Blogging Archives - Wanofi.com
Afaan oromo gara afaan barbaannetti kan jijiru App haaraa
2 Comments / Blogging / By Elsayshop
Baga gamadan afaan barbaadan gara afaan oromooti jijiruun danda’ame jira! akkuma bekkamu waggoota hedduuf google afaan keenya afaan oromo afaan dijitalaa akka nuuf godhuuf karaa bayyee yaalameera ammaas yaalamaa jira. haa ta’u iyyuu malee milka’uu hin dandeenye kanaaf ammayyuu tanaan google translate keessa hin seene! Kanaaf APPin haaraa dhimma kanaf sirritti nu gargaruu ni jira …
Afaan oromo gara afaan barbaannetti kan jijiru App haaraa Read More »
karaa passwordiin kee hatamuu danda’u 3 kan beekuu qabdu
Leave a Comment / Blogging / By Elsayshop
Hi akkam jirtu guyya har’a kana wanti nutti waliin ilaalu karaalee passwordn facebook keenya nu jela hataamu danda’an 5 kan beekun sirritti irra of eegachuu qabdan isan kam akka ta’an kan waliin ilaaluudha! kanaaf obsaan duubisa! Fayyidaan password nama jela hatuu malii? Paswordiin akkawonti keenya kan ittin cufannu yoo ta’u kan namni kamilee nuu jela …
karaa passwordiin kee hatamuu danda’u 3 kan beekuu qabdu Read More »
Hojii website qarshii nuuf argamsiisu akkamitti eegaluu dandeenya?
1 Comment / Blogging / By Elsayshop
Hordoftoota wanofi.com baga gara website keenyatti nagaan dhuftan jechaa, yeroodhaa yerootti akkaataa galii karaa salphaan argachuu dandeenyu karaalee hedduu isiniin gahaa turuu keenya isinuu ragaadha. Namootni hedduun fayyadamaa kan jiranii fi kanneen ammallee toora nuti leenjii kenninu irra hiriiruudhaan galii toora marsariitii irraa argachaa jiran heddummataa akka dhufaa jiran namootni hedduun dhugaa nuuf ba’aa jiran. Haatahu malee …
Hojii website qarshii nuuf argamsiisu akkamitti eegaluu dandeenya? Read More »
Hojii Dijitaalaa Akkamitti eegalu dandeenya? (Cost Per Action) CPA MARKETING
CPA- Jechuun jecha gabaajeetiin yoo ibsamu “ Cost Per Action” jechuudha. Kana jechuun ajaja agarsiistuu keenyaatiin namni tokko odeeffannoo nurraa argatuu agarsiistuu keenya erga cuqaaseen booda kanneen akka galmaa’uu (Register), Dokumatii buufachuu (Dawnload), Cuqaasuu, daawwachuu fi kkf raawwateen booda kaffaltiin keenya eenyummeessaa nuti CPA irraa qabnutti kaffalamaa deema. Gaafa kana jennu gosoota gurgurtaa CPA nuti …
Hojii Dijitaalaa Akkamitti eegalu dandeenya? (Cost Per Action) CPA MARKETING Read More »
BORSAAN DIJITAALAA MAAL AKKA TA’E BEEKTUU?
Borsaa dijitaalaa kan jedhaman online qarshii keenya kan keessatti kuufannu jechuudha. Borsaan dijitaalaa kun gosoota hedduutu jiru akkasuma faayidaaniillee wal irraa adda adda. Kan irratti hundaa’uu fi hojjetu yoo internet jiraate qofa. Mobaayila keenya irraas tahu komputera nuti dhimma itti baanu sun internet qabaachuu kan qabuudha. Off line kan hojjetu miti jechuudha. Digital wallet kan …
BORSAAN DIJITAALAA MAAL AKKA TA’E BEEKTUU? Read More »
Hojii Onilne hojjennu karaa kamiin qarshii fudhachuu dandeenya?
Hojiillee hedduu online dalagnee qarshii argachuu dandeenya. Qarshii kana ammoo akkamiin biyya keenya keessa teenyee fudhachuu dandeenya gaaffii jechu yeroo hedduu kan ka’uudha. Akkaataa hojiilee nuti hojjennu irratti hundaa’ee karaa kaffaltii gosa hedduu akka biyya keenyaatti amansiisaa fi beekamtii kan qabu muraasa nii jira. Paypal Dhaabbata umurii dheeraa xiqqoo fixe tahee garuu hojii kam irrattiyyuu …
Hojii Onilne hojjennu karaa kamiin qarshii fudhachuu dandeenya? Read More »
YouTube irra qarshii argannu dachaa 3 guddifachuuf maal gochuu qabna?
Hi akkam jirtuu welcome! Qarshii Youtube irraa argannu dachaan guddifachuuf qabxiiwwan nuu barbaachisan maalidha? Akkamitti kaffaltii youtube kenyaa ol kaffachuu dandenyaa jechuu keessanin dura kan isin beeku qabdan youtube akkamitti kaffaltii kaffalaa kan jedhuuf sababa inni nuuf kaffaluu beekuun barbachisaadha. Youtube kaninni nuuf kaffaluu ergii monetize tanee boode akka ta’ee beekamadha kan inni nuuf kaffaluus …
YouTube irra qarshii argannu dachaa 3 guddifachuuf maal gochuu qabna? Read More »
WANTI GUDDINA DIINAGDEEF NU DHORKAN maalfaadha?
Yeroo nuti keessa jirruun dursa hojiin namootni addunya kana irraa hojjetan hedduun isaa dadhabbii olaanaa fi galii xiqqaa argamsiisuudhaan kan jiraataa turaniidha. Kunimmoo biyyootuma guddatan irraa kaasnee guddina tekinoloojiin ala hojin hawaasni addunyaa hojjetu humnaa fi baajata guddaa gaafatuun ala hojii salphisun kan galiin gaarii argamsiisu hin turre. Guddina guyyaa guyyaa tekinoloojiitin garuu har’a addunyaan …
WANTI GUDDINA DIINAGDEEF NU DHORKAN maalfaadha? Read More »
DAANDIWWAN SARARA (ONLINE) QARSHII ARGANNU
Jaarraan amma nuti keessa jirru yeroo keenya osoo hin qisaasin, baasii kiisii keenyaas osoo garmalee hin baasiin tekiniloojiin haalota hedduu mijeessee mana ofii teenyee galii adda addaa sarara irraa argachuun yeroo itti danda’ameedha. Dhaloota ammaaf tekinoloojiin bu’aa gurguddaa hojii salphisuun haala salphaatiin qarshii hojjennee argachuu keessatti tajaajila guddaa kennaa jira. akkaataan nuti itti milkaa’aa jirru …
DAANDIWWAN SARARA (ONLINE) QARSHII ARGANNU Read More »
BARREFAMA BARREESSUUDHAAN AKKAMITTI QARSHII ARGACHUU DANDEENYAA?
Barruun nuti barreessinee galii argannu bifa hedduutu jiru garuu bakkaa fi akkaataan itti nuuf kaffalamu garaagara. Haatahu malee barruulee adda addaa barreessuudhaan internet irraa galii nuti argannu bakka hundatti miti. Garuu kan nuti kaffaltii gaarii argannu website mataa keenyaa yoo qabaanne qofa kan gorfamus kanaadha. Barruun nuti website keenya irratti barreessuudhaan galii argannu ammo seera …
BARREFAMA BARREESSUUDHAAN AKKAMITTI QARSHII ARGACHUU DANDEENYAA? Read More »
Akkaata namni hin beeknetti iccitii dhunfaa keessan kan isinii dhoksuu danda’u App ajaa’iba
Password facebook dagatamee karaa haaressuu dandeenyu!
APPS PSIPHON PRO ISA HAARAA 2022
Copyright © 2022 Wanofi.com | Powered by wanofi.com
error: Alert: Koppii Gochun Dhorkaadha !!